Fanarenana ny toekarenan’i Madagasikara Tsy maintsy mila mpamatsy vola
Tsy misy mandeha amin’ny laoniny intsony ny toekaren’i Madagasikara. Mizotra any amin’ny fitotonganana hatrany ny tarehimarika ary raha izao no mitohy dia hanahirana tanteraka ny hanarina ny toekarena Malagasy.
Fampandrosoana ara-toekarena Samy maka ho azy ny Malagasy
“Samy manao izay mahafalifaly ny fony ary samy manao izay mahamiramirana ny sainy”. Izany no teny mahafehy ny asa fampandrosoana eto Madagasikara.
Madagasikara Arahi-maso akaiky amin’ny fampiasam-bola
Tonga eto Madagasikara indray ny iraka manokan’ny FMI (Fonds Monétaire International) izay tarihan’i Marshall Mills. Manara-maso indray ny fanatanterahana ilay FEC (Facilité Elargie de Crédit) andiany faharoa izay nahazoana 80 tapitrisa dolara tamin’ny taona 2017.
FMI Malagasy « Mila mamorona sekoly an’arivony isika. »
Tsy mbola miova ny vahaolana atolotry ny FMI Malagasy na ny fahefa-mividy izao no ilain’ny malagasy, tarihin’ny filohany Jean Jacques Ratsietison, mikasika ny hahafahana manavotra an’i Madagasikara dia ny hoe foanana ny MID na ny « marché interbancaire de devise »,
Fampindramam-bola avy amin’i Inde Hahazo 80,7 tapitrisa dolara i Madagasikara
Nigadona teto Madagasikara omaly alarobia tamin’ny 10 ora sy 20 antoandro ny filoha Indianina Ram Nath Kovind mivady sy ny delegasionina tarihiny.
Synodam-paritany FJKM Boina Vaovao Nahazo fiofanana avy amin’ny CNaPS
Ny synodam-paritany FJKM Boina vaovao no synoda faha-14 nanatanterahan’ny foibe FJKM sy ny CNaPS foibe fiofanana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy. Tanjona iraisana ny tsy hahavery zo ny mpiasa na ny eo anivon’ny fiangonana na ny eny anivon’ny sekolim-pinoana, ka nampahafantarina ireo mpizaika tany Mahajanga, nandritra ny roa andro, ny adidy aman’andraikitry ny mpampiasa sy ny zon’ny mpiasam-piangonana.